Taariikhda Naadiga Buusiyeyaasha Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Naadiga 'Skippers Booster Club' waxaa la bilaabay 1973 markii waalidiinta iyo xubnaha bulshada ay go'aansadeen inay taageeraan waxqabadyada isboortiga iyo kobcinta ee MHS maxaa yeelay waxay ogaayeen in ardayda firfircoon ay inta badan helaan dhibco wanaagsan oo ay dareemaan inay xiriir dhow la leeyihiin dugsigooda. Waxay sidoo kale ogaayeen in waxbarashada sifiican loo soo koobay ay kujirto barnaamij manhaj adag oo isku-dhafan oo dhiirigeliya isku-kalsoonaanta isla markaana bara is-edbinta.
Skippers Booster Club lacag aruurinta ayaa sii waday taageerida kobcinta iyo howlaha isboortiga ee MHS. Lacagta waxaa laga soo aruuriyay iibinta dharka-duugga ee Dukaankeena Booster, tabarucaada xubnaha, iyo howlo lacag uruurin oo kala duwan sanadka oo dhan.
Guga kasta waxaan ka helnaa codsiyo maaliyadeed ururada ardayda kala duwan, oo ay kujiraan kuwa nasiibka u yeeshay inay yeeshaan naadiyad kor u qaada oo taageera dadaalkooda. Naadi kasta oo cunaqabateyn la saaray wuu u qalmaa!
Waxaa jira heerar deeqo kala duwan oo doolarkiiba si togan u saameyn doono ardaydeena Dugsiga Sare ee Minnetonka. Qayb ka noqo dhaqankan adoo taageeraya DHAMMAAN waxqabadyada manhajka isku-xidhka ah ee MHS . Taageeradaada si weyn ayaa loo qadariyo!